Nafxanyaan dubbii barbaacha waan kana naannoo Hora Finfinnee sanatti maxxansaa jirti. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNafxanyaan dubbii barbaacha waan kana naannoo Hora Finfinnee sanatti maxxansaa jirti.
Of qopheessuu fi of eeggannoo!!
“Agartee jarri shira xaxaa jirti, iddoo beeksisi itti maxxanfamee hin beeknetti suuraa kana maxxansite jechuun dhagahaa jira bakka irreecha Hora Finfinneetti .
Yoo maxxanfamee jiraate Qeerroon fi Qarreen Oromoo miiraan osoo hin taane bilchinaan akka bira taran akkasumas suuraa osoo hin taane qabatamaatti Fardaan achumatti itti haa agarsiisan silaa itti beeku. Miira keessa galuun akka shira jaraa galmaan hin geenye nuuf dhaami”
Taayyee danda’aa dhufee si simachuu baatus ati baga nagaan gara biyyakee oromiyaatti galtee.
Artist Hacaaluu Hundeessaa Boonsa
Gaaffii fi Deebii Dr Kadidaan Jaal Goollicha Dheengee waliin godhe